Samarekha.com.np :: स्वास्थ्य |
हाम्रो देशमा त फलामको भाँडामा पकाएको दाल–तरकारी भातसँग मुछेर खाइन्छ । यसरी खाँदा अचारमा रहेको भिटामिन ‘सी’ले दालमा रहेको लौहतत्व शोषण गर्न मद्दत गर्छ । लौहतत्व शरीरमा पुगेपछि रक्तअल्पता कम हुन्छ । फलामको भाँडाको यस उपयोगिताबारे अहिले विज्ञानले सिद्ध गरिसकेको…
अहिले बाध्यतावस घरमै बस्नुपर्ने समय हो । अधिकांश मानिसहरुले शारीरिक तथा मानसिक रूपले सक्रिय भएर काम नगरेको अवस्था हो । तसर्थ यस समयमा स्वस्थकर खानेकुरा खान जरुरी हुन्छ । घरकै भान्सामा भएका निम्न खानेकुरा यसरी बनाएर खान सकिन्छ ।…
केही वर्षअघि म महिला स्वास्थ्यसम्बन्धी केही कार्यक्रममका अछाम पुगेकी थिएँ । स्वास्थ्य शिविरमा एक दिन एउटी महिला आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउन आइन् । भनिन्, ‘डाक्टर साहेब, एक महिना भयो मेरो मुखमा अन्न गएकै छैन । खानै सक्दिनँ । त्यसैले…
आजभोलि हामी केवल आधुनिक औषधी, डाक्टर, अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीको मात्र कुरा गरिरहेका छौँ । तर महिलाको स्वास्थ्य यी कुरामा मात्र सीमित हुँदैन । महिलाको स्वास्थ्यमा समाज कस्तो छ, समाजमा कस्ता संस्कृति छन् जस्ता कुराले पनि प्रभाव पारिरहेका हुन्छन् ।…
सरस्वतीलाई विहेको जग्गेमा बस्ता सबैभन्दा सुन्दरी बनेकी छु भन्ने भावनाले मनै फुरुङ्ग पारेको थियो । साथीहरुको सल्लाहमा उनले विभिन्न किसिमका क्रिमलगायत श्रृङ्गारका सामाग्रीहरु लगाएकी थिइन् । साथीहरुले कोरियन क्रिमले खुब गोरो बनाउँछ भनेका थिए, उनले त्यसै अनुसार गरिन् र…
रक्तअल्पता नेपाली महिला, किशोरीहरु र बालबालिकाहरुलाई आमरुपमा देखा पर्ने समस्या हो । त्यसमा पनि गर्भवतीलाई यो समस्या अलि बढी नै देखिने गरेको छ । यसले गर्दा गर्भको बच्चा रोगी र सानो हुने, महिलालाई विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ…
परनिर्भर बनाउने पोषण कार्यक्रम कसका लागि ?
स्थानीय पौष्टिक खाने कुराहरुको प्रबद्र्धन गरेर कुपोषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नुको सट्टा विभिन्न संघ संस्थाहरुको दवाव वा लोभलालचमा फसेर सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुद्वारा उत्पादित बालभिटा, प्लपीनट ट्यावलेट, क्याप्सुललगायतका सप्लिमेन्टहरु खरिद गरेर वितरण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । यस किसिमको नीतिले…
डा. अरुणा उप्रेती हाल कोलेस्टेरोलको बारेमा धेरै सुन्न र पढ्न पाइन्छ । रगतमा कोलेस्टेरोल बढेपछि मुटुमा धेरै समस्या हुन्छ । कोलेस्टेरोल भनेको एक प्रकारको चिल्लो पदार्थ हो, जुन शरीरमा बगिरहन्छ । जब यो बढी हुन्छ हाम्रो नसा र विशेषगरी मुटुको…
– डा. अरुणा उप्रेती सस्तो, पोसिलो र विकाररहित खाना खाने चाहने इच्छा सबैको हुन्छ । तर, यस्तो खाना सितिमिती कतै पाइन्न । बजारमा तरकारी र फलपूmलको भाउ चर्को हुन्छ । नबिग्रियोस् भनेर फलपूmल र तरकारीमा राखिएका रासायनिक पदार्थ वा विषालु वस्तुले स्वास्थ्यलाई नराम्रो…